Fayraska corona wuxuu kusii fidaa Iowa. In kabadan 500 oo qof oo qaba COVID-19 ayaa ku dhintey gobol | KWIT
Fayraska corona wuxuu kusii fidaa Iowa. In kabadan 500 oo qof oo qaba COVID-19 ayaa ku dhintey gobol
By Halima Osman • Nov 24, 2020
Fayraska corona wuxuu kusii fidaa Iowa. In kabadan 500 oo qof oo qaba COVID-19 ayaa ku dhintey gobolka illaa iyo bishaan iyo guud ahaan 2,224, sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee gobolka. Waxaa jiray 82 kiis oo lagu daray 24-kii saac ee la soo dhaafay Gobolka Woodbury iyo hal dhimsi oo dheeri ah oo haweeney da 'ah.
In kabadan 4,500 oo degan xarumaha daryeelka muddada-dheer ayaa qaba fayraska 143 guryaha dadka waayeelka ah ayaa lagu soo warramey inuu maanta dillaacay coronavirus.
Toddobaad kadib markii la hirgaliyay shuruudaha cusub ee maaskaro iyo xaddidaadda kulammada bulshada ee Iowa Guddoomiyaha Gobolka Kim Reynolds ayaa ka dhawaajisay rajo wanaagsan. Inkasta oo heerarka cudurka ee Iowa uu weli sarreeyo, waxay tiri tirada kiisaska la xaqiijiyay iyo heerka guud ee gobolka ayaa hoos u dhacay toddobaadkan. xanuunsan yahay ama laga heley cudurka loo yaqaan 'coronavirus'.
Gudoomiyaha ayaa kahadlay garaacida shuruucda iyo qawaaniinta inta lagu gudajiray xiligii la arkay COVID-19 inuu ku faafayo si qaas ah heer sare meelaha qaarkood. Mid ka mid ah wariyeyaasha sababta ay u soo wici weyday si dhakhso ah bishii Oktoobar iyo Reynolds ayaa sheegtay in gobolka uu tallaabo ka qaaday aagagga sida magaalooyinka kuleejka.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale ka hadlay sida ay Iowa u gaarsiin doonto talaalada coronavirus ee soo socda bilaha soo socda. Reynolds waxay sheegtay in gobolku uu eegi doono Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa iyo saraakiisha caafimaadka ee dowladda dhexe sidii loo kala hormarin lahaa bixinta tallaalka.
Badhasaabka Nebraska Pete Ricketts iyo masuulka caafimaad ee ugu sareeya gobolka ayaa mar labaad soo
By Halima Osman • Nov 23, 2020
Badhasaabka Nebraska Pete Ricketts iyo masuulka caafimaad ee ugu sareeya gobolka ayaa mar labaad soo saaray codsiyo deg deg ah oo loogu talagalay dadka inay ka taxadaraan joojinta infekshannada COVID-19.
Ricketts wuxuu mar labaad ka codsaday Nebraskans inay xafladahoodii ka dhigaan Thanksgiving yar. Wuxuu sidoo kale dadka u sheegay inay banaanka ka joogaan baararka habeenkii Arbacada. Taasi badanaa waa wakhti mashquul baararka.
Shir Jaraa'id oo maanta, Gudoomiyaha Gobolka Iowa Kim Reynolds wuxuu kaga hadlay joojinta hirarka si
By Halima Osman • Nov 20, 2020
Shir Jaraa'id oo maanta, Gudoomiyaha Gobolka Iowa Kim Reynolds wuxuu kaga hadlay joojinta hirarka sii kordhaya ee COVID 19. Waxay sidoo kale kor u qaaday barnaamijkeeda macluumaadka bulshada.
Shir jaraa'id oo uu maanta qabtay, barasaabka Iowa Kim Reynolds wuxuu kaga hadlay joojinta hirarka s
Shir jaraa'id oo uu maanta qabtay, barasaabka Iowa Kim Reynolds wuxuu kaga hadlay joojinta hirarka sii kordhaya ee COVID 19. Waxay sidoo kale kor u qaadday barnaamijkeeda macluumaadka bulshada.